Finfinneen Handhuura Oromiyaa Taatullee Addis Ababaan Godaannisa Gabrummaati – Welcome to bilisummaa
Finfinneen Handhuura Oromiyaa Taatullee Addis Ababaan Godaannisa Gabrummaati
Bar dhibbee 19ffa keeysa eega biiyti oromoo kiyyooMiniliik 2fa jala kufte irraa eegalee, lafti namaa wajjiin weerartoota habashaatiif hiramtee, abbaan biyyaa lafuma isaa irratti sirna gabbaar ja’amee beekkamuun ciisanyaa ykn hojjataa qonnaa tahuun yaadannoo jaarraa dabreeti.
Lafti oromiyaa akka waliigalaatti seeraan beekkamtee daangawuun waan tokko tahee, mootummaan mooteeqorkeen kun rakkoollee tokko tokko uumuuf ykn habaqaaluuf tattaafachuun isaa ammoo hinoolamne. Fakkeenyaaf daangaa sabaa fii sablammootaa kanneen oromiyaa daandeysan hunda irratti jechuun nidandayamaa, bakka takka takkatti ona (aanaa) tokko tokko, baka gariitti ammaas araddaalee hedduu
abboommee laguudhaan akka oromiyaa waliin gaafii daangaa keeysa galan taasisaati as afe. Kanneen keeysaahiif magaalota akka Dirree Dhawaa, Harar, Jijjiga, Moyyaaleefii Awaash faa maqaa dhahuun nidandayama. Bifa kanaan naannoo hundaan lafa oromyaa kottoonfachiisuun shira mootummaa kanaa kan fuulduraas oromoo fii sabaa sablammoota walgalaafachiisuuf karoorfamee bal’inaan itti hojjatamaa jiru hoggaa tahu tooftaan biraa ammaas tan magaalaa finfinnee irratti xiyyeefatte tana tahuu isiiti.
Maggaalaan Finfinnee hundeeyfamuma isii irraa kaaftee kan bu’uramte akkuma magaalota biraa kanneen Oromiyaa keeysatti arkaman hundaatti qubsuma weerartootaa hoggaa taatu barreeysitoota seenaa birattiis
magaalota batalaa ykn mishigii ja’amaniiti beekkaman. Kana jechuuniis bara weerara miniliik keeysa lafa nafxanyootni ummata naannawaa humnaan buqqaasanii qubatan hoggaa tahan lakkuma qubsumti tun
babal’achaa deemtuuniis magaalawaa deemuu isaanii caalaa ummata oromoo daran madditti dhiibaa akka dhufan qabeentaa ummata magaalotaa kanaa kan ammallee calaqqisu irraa hubachuun nidandayama.
Guddinni finfinnee kan oromoo madditti dhiibaa adeemsifamu kun galmi isaa lakkuma deemuun gama kaabaatiin naannoo amaaraatiin fii gama kibbaatiin ammaas naannoo ummatoota kibbaatiin waliin tuquudhaan
oromiyaa amma jirtu tana baka lamatti fottoysuu irratti kan xiyyeefate taachaa shalaguuniis gamnummaadha. Gaafas kutaa walloo kan amma naannoo amaaraa jalatti buluu wajjiin oromiyaa guddittii takka tahuun hafee oromiyaa xixiqqoo sadihiifii sanii ol uumuuf akka yaaddamaa jiruus hubachuun nidandayama. Kuniis bulchiinsa qofa osoohintahin ilaalcha sammuu tiifii sabboonummaa oromootiis qoqqooduu fii darachiisuuf akka tahe shalaguun nama hindhibu.
Walumaagalatti shira mootummaan habashaa dhufaa fii dabraan saganteeyfatee saba kanaan oggolchuuf tattaafatuuf oromoon yoomiyyuu taanaan duuyda shiireysee bitamee hinbeeku. Lolli walloo, kan arsiitii fii
calanqootiis kanuma mirkaneeysa. Fincilli barattoota oromoo kan amma masrer planii wayyaannee kana mormuudhaan qabsiifamees ittifufa diddaa gabrummaa kan oromoon bara baraan gaggeeysaa ture hoggaa tahu wareegamtootni fincila kanaatiis gootota yoomiyyuu seenaan faarsuu akka taham ragaa bahuun barbaada.
Tags azeeb masfin Jaafar Alii
Previous SOMAAN GOOTAA URGAAYEE – 2
Next Oduu Muddituu/Breaking News